Coiling case with he - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: coiling case with headphone line protec... (Englisch - Burmesisch)
The SARS epidemic resulted in 8,096 reported cases with 774 deaths, spreading across many countries and continents.
SARS ကပ်ရောသည် ကမ္ဘာအနှံ့မှ နိုင်ငံများနှင့် တိုက်ကြီးများထံ ပျံ့နှံ့သွားကာ သေဆုံးသူပေါင်း 774 ဦးဖြင့် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 8,096 ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါသည်။
Apart from the super-spreaders, it was estimated that each case could give rise to approximately two secondary cases, with an incubation period of4to7days and the peak of viral load appearing on the 10th day of illness.
‌‌ရောဂါအား အဆမတန် မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် ကူးစက်စေသူများမှလွဲ၍ ရောဂါအစပျိုးသည့် ကာလ4ရက်မှ 7ရက်အတွင်း လူနာတစ်ဦးချင်းစီမှ ခန်မှန်းခြေအားဖြင့် ဆင်ပွားလူနာနှစ်ဦးခန့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးကာလမှာ ဖျားနာပြီး 10 ရက်မြောက်နေ့တွင် ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
Epidemiological history: (1)ahistory of travel or residence in Wuhan city and surrounding areas, or other communities where COVID-19 cases had been reported in the last 14 days before symptom onset; (2)ahistory of contact with SARS-CoV-2 infectious cases (with positive nucleic acid test); (3)ahistory of contacting with patients with fever or respiratory symptoms from Wuhan city and surrounding areas, or other communities where COVID-19 had been reported in the last 14 days before symptom onset; (4)ahistory of contacting with cluster of confirmed cases (≥2cases with fever and/or respiratory symptoms occurred within 2 weeks in small areas, such as home, office, class of school, etc).
ကူးစက်ရောဂါပျံ့ပွားခြင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်း- (1) ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်မလာမီ လွန်ခဲ့သော 14 ရက်တွင် (Wuhan city) ဝူဟန်မြို့နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာများ၊ သို့မဟုတ် COVID-19 ဖြစ်ပွားသည်ဟု သတင်းပို့ထားသည့် အခြားသောအသိုက်အဝန်များထံ ခရီးသွားလာခဲ့သော သို့မဟုတ် နေထိုင်ခဲ့သော မှတ်တမ်း၊ (2) (ပေါ့စတစ် နျူကလစ်အက်ဆစ်စစ်ဆေးမှုရှိထားသော) SARS-CoV-2 ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ထိတွေ့ခဲ့သောမှတ်တမ်း၊ (3) ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်မလာမီ လွန်ခဲ့သော 14 ရက်တွင် (Wuhan city) ဝူဟန်မြို့နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာများ၊ သို့မဟုတ် COVID-19 ဖြစ်ပွားသည်ဟု သတင်းပို့ထားသည့် အခြားသောအသိုက်အဝန်များမှ ဖျားနာနေသော သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများရှိနေသော လူနာများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သောမှတ်တမ်း၊ (4) အတည်ပြုထားသည့်ဖြစ်စဉ်များဖြင့် ထိတွေ့ခဲ့သောမှတ်တမ်း (အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်းစာသင်ခန်း၊ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဧရိယာငယ်များတွင်2ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖျားရှိခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများရှိနေသော ဖြစ်စဉ် ≥ 2)။
Whereas most of the laboratory-confirmed cases originate from the Middle East, imported cases with occasional secondary spreads to close contacts have been reported in various European countries and Tunisia.
စင်စစ်အားဖြင့် ဓါတ်ခွဲခန်းမှအတည်ပြုသည့် ရောဂါကူးစက်မှုအများစုသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတဆင့် ဇစ်မြစ်ခံခဲ့ပြီး အနီးကပ်ထိတွေ့မှုမှတဆင့် ရံဖန်ရံခါ ဆင့်ကဲကူးစက်ပြန့်ပွားသော အခြားနေရာမှ ဝင်ရောက်လာသည့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကို ဥရောပနိုင်ငံအမျိုးအမျိုး နှင့် တူနီးရှားနိုင်ငံများအတွင်း အစီရင်ခံထားပါသည်။
ထို အကြိုစမ်းသပ်မှုသတင်းပို့ချက်များကြားတွင် ပျောက်ဆုံးနေသောဒေတာများကို တွက်ချက်ရန် ပိုင်းခြေအဖြစ် ဖော်ပြထားသော သိရှိထားသည့်ရလဒ်ဖော်ပြချက်များပါရှိသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုသာအသုံးပြုထားသည့် အပေါ်ပိုင်းကန့်သတ်မှုနှင့် ပိုင်းခြေအဖြစ် ဖော်ပြထားသော ICU တွင်နေရခြင်း ပါရှိသော၊ မပါရှိသော ဆေးရုံတက်ရခြင်းများအတွက် သိထားသော၊ မသိထားသောဖော်ပြချက်များပါရှိသည့် ဖြစ်စဉ်များပါဝင်သော အောက်ပိုင်းကန့်သတ်မှုတို့ဖြင့် အကွာအဝေးများကို ခန့်မှန်းထားပါသည်။
If there arealarge number of COVID-19 cases nationally, convalescent samples could be collected from RCGP RSC practices where there are confirmed cases, with the ability to link to the full medical record.
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအားဖြင့် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပမာဏ ကြီးထွားနေပါက RCGP RSC ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဆေးမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မှုကို အသုံးချ၍ အတည်ပြုလူနာများအတွက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့် လူနာများ၏ သွေးနမူနာများကို စုဆောင်းရယူနိုင်ပါသည်။
All butahandful of countries have reported at least one case, with the highest numbers of reported cases in the United States, Spain, Italy, Germany, France, mainland China, Iran, and the United Kingdom.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ်ပြည်မကြီး၊ အီရန်နှင့် ယူနိုက်တက် ကမ်းဒမ်းတို့မှ မြောက်များလှသည့် အတည်ပြုဖြစ်စဉ် ကိန်းဂဏန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုသည် အနည်းဆုံး ရောဂါသည်တစ်ဦးရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားကြသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါများရှိနေပြီး ရောဂါလက္ခဏာမပြသူများနှင့် စောင့်ရှောက်ခံလူနာများ၏ COVID-19 အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန်၊ COVID-19 ကူးစက်မှု နှုန်းနှင့် ပြန့်နှံ့မှုပုံစံတို့ကို သေချာစိစစ်လေ့လာရန်နှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်မှု မူဝါဒ၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။
kaifa anta (Arabisch>Englisch)heeds in tagalog (Englisch>Tagalog)mengecilkan skop (Malaysisch>Englisch)häneltä (Finnisch>Vietnamesisch)global inequity (Englisch>Tagalog)fireplace tagalog (Englisch>Tagalog)expectations (Englisch>Tagalog)ten behoeve van (Holländisch>Deutsch)i know my worth (Englisch>Tagalog)rukh bachao (Englisch>Panjabi)ponteabarrer (Spanisch>Englisch)datenbestatigung (Deutsch>Englisch)buray ka (Englisch>Tagalog)te harinui (Maori>Englisch)brandish (Englisch>Portugiesisch)just like you ka matlab hindi me kya hota hai (Hindi>Englisch)ፈጣኒቱን (Amharisch>Englisch)anong pake mo (Tagalog>Englisch)branch manager (Englisch>Tagalog)feel me (Englisch>Tagalog)sektor pekerjaan (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))kosis karo (Hindi>Telugu)i will hold you tight (Englisch>Tagalog)ano ang fragments (Englisch>Tagalog)get in trouble (Englisch>Tagalog)